The Ab Presents Nepal » बैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केको बीस दिनमै बिप्लव कार्यकर्ता बनेर मारिए!
बैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केको बीस दिनमै बिप्लव कार्यकर्ता बनेर मारिए!
भोजपुर, जेठ ८- भोजपुरमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा घाइते भएका नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लव) नेतृत्वको माओवादीका कार्यकर्ता तिर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको छ ।
‘मंगलवार दिउँसो भोजपुर र खोटाङ्गको सिमानामा पर्ने मैयुम क्षेत्रको धोत्रे भन्ने ठाउँमा प्रहरीले घिमिरेमाथि गोली चलाएको थियो । प्रहरीको गोली प्रहारबाट षडानन्द नगरपालिका २ कुदाक काउले निवासी विप्लव कार्यकर्ता घिमिरे गम्भिर घाइते भएका थिए । खुट्टामा गोली लागेको घिमिरेलाई थप उपचारको लागि धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएकोमा बाटैमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ‘।
‘गोली लागेर गम्भिर घाइते भएका उनको स्थानीय अन्नपुर्ण स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचारपछि धरान पठाइएको थियो । मंगलवार साझ पाँच बजे धरान पठाइएको घिमिरेको धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बुधवार बिहान ३ बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिशेष सुराकीको आधारमा खोजी गर्दै पुगेको भोजपुर जिल्ला र प्रदेश नम्बर १ बाट खटिएको प्रहरी टोलीमाथि विप्लव कार्यकर्ताले गोली चलाउन खोजेपछि जवाफी फायरमा उनी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनास्थलबाट एक थान पेस्तोल, पाँच राउन्ड गोली, एक थान वाइनाकुलर र चार थान डेटोनटर बरामद गरेको बताएको छ’ ।
‘टेम्केमैयुङ्ग गाउँपालिका वडा नं.२ छिनामखुस्थित धोत्रे जङ्गलमा विप्लवका हतियारधारी समूह र प्रहरीको जम्काभेट हुँदा दोहोरो फायरिङ भएको भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाको भानई छ । उक्त ठाउँ छिनामखु र खोटाङ्गको केपलासगढी गाउँपालिकाको सिमा क्षेत्रमा पर्दछ । दुई दर्जन भन्दा बढीको संख्यामा रहेका हतियारधारी समूह त्यहाँबाट जङ्गलको बाटो हुँदै भागेको बताइएको छ । प्रहरी टोली घटास्थलभन्दा तल र विप्लव कार्यकर्ता माथिबाट भएपछि विप्लवका कार्यकर्ताले गोली चलाएको प्रहरीको दावी छ ‘।
‘विगत केहिदिनदेखि भोजपुर, खोटाङ्ग र सोलुखुम्बुको सिमा क्षेत्र मैयुम, दोभानेमा विप्लवका हतियारधारी कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले सूचना पाएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा साल्पा सिलोछोको दोभाने क्षेत्रमा समेत प्रहरीले गस्ती बढाएको थियो ‘।
‘रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशमा बस्ने घिमिरे आफ्नो गाउँमा पुगेको जम्माजम्मी २० दिन मात्रै भएको युवा संघका नेता रोशन बस्नेतले जनाउनु भएको छ । ‘२० दिनको अन्तरालमानै आफन्तको घर जान्छु भनेर घरबाट हिडेका उनी विप्लव समुहमा लागेर प्रहरीसंगको दोहोरो फायरिङमा एकाएक मृत्युको मुखमा पुगेको समाचारले दुखी बनाएको छ,’ बस्नेतले लेख्नुभएको छ ‘।